“မပြင်စကောင်း ပြင်စကောင်း ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အကြောင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » “မပြင်စကောင်း ပြင်စကောင်း ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အကြောင်း”
“မပြင်စကောင်း ပြင်စကောင်း ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အကြောင်း”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 21, 2015 in Photography | 14 comments
ဓါတ်ပုံနဲ့ပါတ်သက်ရင် ၀ိဝါဒ ကွဲပြားလေ့ရှိတာကတော့
ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ထပ်မံပြီး ပြင် မပြင်ဆိုတာပါဘဲ။
ဟိုးအရင်ဖလင်ခေတ်က တော့ ပုံတစ်ပုံ ကို ကူးပြီး ရင် “ခဲထိုး “လေ့ရှိပါတယ်။
အစက်အပျောက်လေးတွေဖျောက်ချင်တာ အလင်းအမှောင်ထည့်ချင်တာကို ခဲတံလေးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်
ကွန်ပြူတာခေတ်မှာတော့ ဖိုတိုရှော့ တို့ လိုက်ရွှမ်း တို့နဲ့ပြင်ကြပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်း အဆင်မြင့်လာချိန်မှာတော့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ ကို ဖုန်းထဲမှာတင်ပြင်လို့ရပါတယ်။
ဖုန်းအဆင့်မြင့်လေ ပြင်ရတာပိုမိုလွယ်ကူ သက်သာလေ
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရလေပါဘဲ။
” ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို ပြန်ပြင်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပြင်မထွက်ခင် အလှပြင်တဲ့သဘောပါဘဲ” လို့ဆိုသူရှိသလို
“တော်ရုံ တန်ရုံပညာနဲ့လောက်ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အလင်းအမှောင်ကွက်တိမရနိုင်ဘူး ဒီတော့ ပြင်သင့်တာတော့ ပြင်ရမယ်”လို့
အချို့က မသိမသာ အလင်းအမှောင်လေး
အချို့က သိသိသာသာ ရိုက်တုံး က မပါတာတွေဆွဲဖြည့်
ကျနော်က လည်းပုံပြင်တာကို မကြိုက်တဲ့သူထဲမှာပါပါတယ်.
ဒါပေမယ့် လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ လိုအပ်ရင် အလင်းအမှောင်ပြင်ပါတယ်။
မနေ့ညက ငါးကင်သွားဝယ်ရင်း စောင့်ရတာကြာတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လက်ဆော့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ ဖန်ရှင်တွေအသုံးချပြိပြီးကြည့်ပါတယ်.
ကျနော်လဲ ဖိုတိုရှော့ လိုက်ရွမ်း သုံးတာမကျွမ်းကျင်ပါဘူး။
မဂ္ဂဇင်း.. သတင်းစာတွေမှာ… ဓာတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာပါတဲ့ပုံတွေကတော့.. အကုန်ပြင်ထားကြပါတယ်..။
ပြင်ဖို့အတွက်..စကတည်းက.. Raw နဲ့ရိုက်ကြတာ…။
သတင်းဓာတ်ပုံကိုတော့.. ပရိုကပြင်တာကောင်းပါတယ်..။ အလင်းအမှောင်လောက်ပြင်ပေါ့..။
မူလမှာ..မရှိ/မပါတာကို .. ထည့်တာတော့ မသင့်…
သတင်းဓာတ်ပုံသမားရဲ့.. Ethic ကျင့်ဝတ်တော့ထိန်းရတယ်ပေါ့…
သတင်းသမားမှမဟုတ်… ပရိုတိုင်း.. ကိုယ့်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုတော့ ထိန်းသင့်..။
ကျင့်ဝတ်နားမလည်တော့ ထင်ရာစိုင်းပြီး ပုံတွေကို လျောက်လုပ်ကြတာပါ
ဥပဒေ မသက်ရောက်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာပိုဆိုးတာပေါ့
ဓါတ်ပုံပြင်တယ် ဆိုတာ ဖလင်ခေတ်ထဲက ပြင်ကြတာပဲ
ဖိုတိုရှော့ တခေတ်ဆန်းမှ မဟုတ်ဘူး။
ပြောရရင် သတင်းဓာတ်ပုံလည်း ပြင်တယ်ဗျ။အောက်က ဥပမာက အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ရဲ့
သာမန် မဂ္ဂဇင်းတောင်မဟုတ် ၁၉၈၄ခုနှစ်ထုတ် National Geographic Magazine ရဲ့ Cover မှာ သုံးတဲ့ပုံနော်….
The pre-print photo retouching was done by Graphic Art Service, based in Marietta, Georgia.
ယနေ့ခေတ် DSLRs တွေမှာ In-camera editing soft တွေ ပါလာတယ်….။
အကြမ်းဖျဉ်း camera က A-mode နဲ့ ရိုက်ထားတာကို ကင်မရာထဲမှာပဲ B-mode နဲ့ ရိုက်ထားပါတယ် ဆိုပြီး
ပြင်မှတ်ပေးပါဆိုပြီး PC သုံးစရာမလိုဘဲ ကင်မရာထဲတင် တခါတည်း ပြင်လို့ ရလာတယ်… (Photo stacking အပါအ၀င်ပေါ့)
သည်နေရာမှာ ပြင်တယ် ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ ကျလွန်းတဲ့ စကားလုံးကို ခွဲပြောဖို့လိုလာတယ်…
Brightness/ Contrast လောက်ပြင်တာကိုတော့ သတင်းဓါတ်ပုံမှာလည်း လက်ခံကြရတဲ့ ကိစ္စပဲ။
ဆိုပါစို့ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် ခန်းမထဲကထွက်လာတယ် ကားထဲဝင်တယ်။ သတင်းဓာတ်ပုံသမားရှေ့က
သူဖြတ်သွားချိန်က စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ။ အကောင်းဆုံးချိန် အကောင်းဆုံး setting ချထားပေမယ့်
lighting/ weather စသည်ကြောင့် ပုံက မှောင်လွန်း / လင်းလွန်း ဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်
သည်တော့ Brightness/ Contrast ပြင်ကိုပြင်ကြရတယ်။
နောက်တမျိုးက White Balance
ကိုယ်ချိန်ထားတုန်းက natural light တကယ်တမ်း ထွက်လာတော့မှ မီးအ၀ါတွေထွန်းပြီး အလင်းပေးထားတယ်ဆို
လူအသားအရောင်က ၀ါထိန်ကုန်မှာပဲ။ သည်တော့ WB လည်း ပြန်ချိန်ရတတ်တယ်။
သည်ဘက်ခေတ် PS မှာ blur-reduction ဆိုတာပါလာတယ်။ focal blur အပြင် motion blur ခေါ်တဲ့ လက်လှုပ်လို့ လူတိုက်မိလို့ ၀ါးသွားတာတွေကို
(အတိုင်းအတာ တခုအထိ) ပြင်လို့ရနေပြီ။ သတင်းဓာတ်ပုံမှာ ဒါမျိုးတွေလည်း ပြင်လေ့ရှိတယ်။
Color နဲ့ ရိုက်လာတဲ့ပုံကို B/W အနေနဲ့ (အတွင်းစာမျက်နှာမှာ) သုံးမယ် ဆိုရင်လည်း ပြင်ရလေ့ရှိတယ်။
ဒါက အပူရောင် အအေးရောင် နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အပိုင်း
ဥပမာပေးရရင် အစိမ်းရင့် နောက်ခံမှာ အပြာရင့် subject ကို ခပ်မှောင်မှောင် lighting မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ ဆိုပါစို့ (၂ရောင်လုံး အအေးရောင်တွေ)
သည်တိုင်း B/W ပြောင်းပြီး print လိုက်ရင် အအေးရောင်၂ရောင်က ရောသွားပြီး မဲမဲသဲသဲ ပုံပဲ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
အဲသည်မှာ photo filter တချပ်ထိုးပြီး အစိမ်းကို အ၀ါဘက် သမ်းအောင် လုပ်ယူတယ် (အပူရောင် ဖြစ်အောင်)
ပြီးမှ print တဲ့အခါ အပြာက မည်းတဲ့ဘက် အစိမ်း(အ၀ါ) က ဖြူတဲ့ ဘက် အနေနဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေတဲ့ B/W ပုံတပုံ ဖြစ်လာတယ်။
ဖြစ်သလိုရိုက်ရတဲ့ အနေအထားမှာ စောင်းနေတဲ့ပုံ ပြန်တည့်တာတို့အဝေးကရိုက်ပြီး အနီးကပ် ပြန်ဖြတ်တာတို့ …။
မလိုလားအပ်တဲ့ (ပုံအတွက် အရေးမပါတဲ့ အရာတွေ) ကို Crop လုပ်တာမျိုးတို့ လုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ်
ဥပမာ လှေကားထောင့်စွန်း မလိုအပ်ဘဲ ပါနေတာတို့.။ ဘေးက လူတွေရဲ့ ခေါင်းတခြမ်း လက်တဖက် စသည်။
အပေါ်က ဟာတွေနဲ့ မတူဘဲ Crop မှာကျတော့ နည်းနည်းပြောစရာ ရှိတာက ရိုးသားဖို့ လိုတယ် (ကျင့်ဝတ်)
ဆိုပါစို့ တဖက်က ဆန္ဒပြတယ် တဖက်က လုံထိန်းက စောင့်တယ်… တဖက်တည်းကို ရိုက်ပြ(Crop ချပြီး)
သည်လောက် သည်လောက် တွေ ဆိုးကုန်ပါပြီ ဆိုတာမျိုး တဖက်စောင်းနင်းတော့ မပြသင့်ဘူး မှတ်ပါတယ်။
ပြင်လို့ရ (ပြင်သင့်တဲ့) အကြောင်းတွေအပြီး မပြင်သင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ subject တွေကို ဖြုတ်တာတပ်တာမျိုးပါပဲ။
ဥပမာ လူထု စည်းရုံးပွဲ သွားရိုက်တယ် ကွင်းတ၀က်လူပြည့်တာကို တကွင်းလုံးပြည့်သယောင် လူအုပ်ကို ပွားထည့်တာတို့
ပုံမှာပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တို့ အမှတ်အသားတို့ကို ဖြုတ်ပစ်တာတို့ စသည်ပေါ့။
ဆိုတော့ ပြင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြန်ကောက်ရင် enhanced လုပ်တာနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်တာ ၂ပိုင်းခွဲပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်
သတင်းဓာတ်ပုံပင်လျင် enhanced လုပ်ခွင့်ရှိ တယ်…။ သို့သော် ဖြတ်ညှပ်ကပ် ကား မလုပ်သင့် (ethic နှင့်မညီ။ exceptional cases များတော့ ရှိပါသည် )
ကြားထဲ.. ဆိုင်းဘုတ်.. ပန်းချီကား.. ရွဲ့တွန့်နေတာမို့.. တည့်အောင်ပြင်တာလည်းရှိ..။
ကြုံလို့ပြောရရင်.. B&W မှာ ပုံနှိပ်ရင်ဖလင်ကတချပ်ထဲ..။ Color မှာ CMYK ၄ချပ်..။
B&W အတွက်စာမျက်နှာကို ကာလာပုံတွေနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ရင်.. ပုံတွေကြောင်ကုန်..မှောင်ကုန်ရော..
ကျုပ်ကတော့.. pdf နဲ့.. Printed နဲ့.. ဘယ်ဟာဦးစားပေးလဲ..တွေးတယ်ရွေးတယ်..။
ကာလာလည်းဖြစ်အောင်.. B&W မှာ ဂရေးစကေးပြောင်းလိုက်လဲ…. နည်းနည်းထင်အောင်…
ကျနော်က သုံးရုံဘဲ သုံးတတ်တာ
ဒီလို ကျကျ နန ပြန်ရှင်းပြလောက်အောင်မသိတာအမှန်ဘဲ
ဓါတ်ပုံကို လှအောင်ပြင်တာတော့ ဟိုးဖလင်ခေတ်ကတည်းကပြင်ကြတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်
အဲမှာတရုတ်ကြီးတစ်ယောက်က ဓါတ်ပုံတွေ ပြင်နေတာ အမြဲတွေ့နေရတာ
အိမ်မှာတင် ဓါတ်ပုံ စတူဒီယို ထောင်ထားတော့
သူ့အိမ်မှာ ဓါတ်ပုံပစ္စည်းအစုံရှိတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက
သူ့ဆီက နေပြီးဓ်ါတ်ပုံပညာတော့ မသင်လိုက်ရဘူး
မလုပ်တတ်ရင် ကိုစိန်သော့ ကိုလှမ်းမေးလိုက်တာပါဘဲ
အခု မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်တွေမှာ အကုန်ပြင်ကြတာပေါ့။ လူပုံတွေကို retouch လုပ်ကြတာများပါတယ်။ ကျတော်ကတော့ မူရင်းပုံကို အရသာကြီးပျက်သွားအောင်တော့ ပြင်ရတာ သဘောမတွေ့ဘူး။ တကယ် Raw အရသာကို ပိုကြိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း PS သမားတစ်ယောက်ပါပဲ။
သတင်းပုံကတော့ လုံး ၀ မပြင်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
These are questions that journalists, viewers, and academics have grappled with from the beginning. Photography, of course, is an art form, but in journalism, there’s an expectation and responsibility of truth and realism.
If you manipulate your photos in any way, from editing contrast to adding filters to, yes, using HDR, we just ask that you be transparent about it. Please be up-front in your iReports about any modifications you’ve made toaphoto. Editing your pictures does NOT preclude them from being used on CNN — we just need to know about it so we can pass that information along to our viewers.
If you’re going to editaphoto, please remember that you can make adjustments, but you need to keep the photo’s original meaning in tact. That means don’t crop out people or objects who are important to the meaning of the picture, and don’t make so many adjustments that the viewer is misled (i.e., if the photo was shot at night, don’t play with the lighting to make it look like it was shot during the day).
All the same rules apply for photos taken with apps like Instagram and Hipstamatic. We prefer unfiltered images, but if you’d like to addafilter, just make sure you tell us what you did.
Finally, there’s no need to add watermarks or other credits to photos you submit to CNN iReport. We never use iReport images on CNN platforms without checking with the photographer first, and we always credit you. So you don’t need to addawatermark to images you share with us (and we probably wouldn’t useaphoto that was obscured byawatermark in the first place).
Make sense? We hope so. Please leave any photojournalism ethics questions you may have in the comments, and we’ll make sure to get back to you!
အယ်ဒီတာရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့.. သူတို့(ဆိုင်ရာပရို)ကိုလွှဲပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သဘောပါ..။
တင်လက်စနဲ့.. ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တာလေးတွေ.. တင်လိုက်ပါကြောင်း…။
ကိုယ့်ပရိသတ်.. မိန်းမဦးစားပေးလား.. ယောက်ျားဦးစားပေးလားနဲ့.. တိုင်းစေလို..။
.သတင်းသမားတွေအတွက် ကျင့်ဝတ် (Ethic)ကအရေးကြီးပါတယ်
ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လွဲမှာစိုးရိမ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကို ဒီအတိုင်း ခလုတ်နှိပ်စဉ်ကတော့ ဘာမှ ပြသနာမရှိ .. အများဆုံးလုပ်မှ crop ပဲ ..
ဘာမှလဲ မလုပ်တတ်တော့ မူရင်းအတိုင်းပဲ ရိုးသားစွာ တင်ပြခဲ့တယ် ..
ဒါပေမယ့် ၀ါသနာပါလာတော့ လေ့လာရင်း သူများပုံတွေကိုပါ လေ့လာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို မပြင်ပဲနဲ့ ချမပြချင်တော့တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ် .. အနဲဆုံး brightness & contrast လောက်တော့ ပြင်လေ့ရှိလာပါပြီ …
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကောင်းဖို့အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ထဲမှာ ဓါတ်ပုံပြင်တတ်ဖို့ကလဲ ပညာတစ်ခုအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိသင့်လာပါပြီ … ဓါတ်ပုံသီးသန့်ပြင်ဖို့အတွက် lightroom ကိုသုံးတတ်ဖို့လဲ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါပြီ .. ပြောမယ့်သာပြောတာ ကျွန်မအခုထိ lightroom မသုံးတတ်သေးဘူး ..
ကျနော်လဲ ပုံကို မပြင်ဘူးလို့ ခေါင်းမာခဲ့ဘူးပါတယ်
ဒါပေမယ့် မပြင်ရင် မလှ မပြင်လို့ မရ တာတွေတွေ့ လာပါတယ်
ဒီတော့ လဲ ထုံးစံအတိုင်း ကိုစိန်သော့ဘဲ အပူကပ်ရတာပေါ့
သူကဘဲ ကျနော်ကို လိုက်ရွမ်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်
အများကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော် ဖြစ်အောင်တော့ ပြင်တတ်လာသပေါ့
ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ပုံတွေတောင်မှ မပြင်ရဘူးဆိုပေမယ့်
သိပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာများကတော့ ကင်မရာခလုပ် ကို လဲ မြင်တိုင်းမနှိပ်ပါဘူး
နှိပ်ပြီးရင်လဲ ပြင်စရာမလိုအောင်ကောင်းတဲ့ သေချာ တဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့ ဘူးပါတယ်
ပြင်လို့ရတဲ့ app လေးရှယ်ပေးပါ